Bekas Ketua Pemuda PAS Greenwood Gombak Sertai PAS
Anwar 'sells' PKR seats to DAP
[VIDEO] Vokalis Rock FTG, Tajul, Serah Borang Sertai PAS
ဒါလားကွ မင်းတို့ပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ? ထွီ!
Altantuya-Najib-Bala: Will Cecil sue Haris, Americk
Obama’s Myanmar: The Rohingya Odyssey nc-Clip 64 Shwe Lu Maung
Free health tests at Air Itam
Press Interview: Traffic decongestion formula for Air Itam
Masuk Bolos Keluar Pun Bolos - Apa Sudah Jadi Dengan Tahap Pertahanan Negara?
Green Tea: Healthy and Effective Way to Lose Weight
Mystery Of PTS K9s Still Lies With DVS And Fire Department
Najib Juga Didakwa Dalang Pencerobohan Di Lahad Datu
Reunited After Ten Years
How To Get Rid of Fat Under the Belly Button
Professor Dr. U Aung Gyi: လူရည်ချွန် ခေါ်သံ
Land acquisition and compensation for development projects
Tian Chua Sudah Didakwa, Tapi Masih Terkial-kial Mencari Bukti
Pungat, round two
Sabah RCI must continue
Posted: 17 Mar 2013 11:01 AM PDT
Pengumuman bekas Ketua Pemuda Umno Greenwood, Gombak, Sdr. Zazly menyertai PAS sebentar tadi setelah menjadi lebih kurang 15 tahun menjadi sebagai ketua Umno Greenwood dan sekarang katanya zaman anak muda untuk Pakatan Rakyat.
Anak muda ini baru sahaja menyerahkan borang untuk membuka cawangan baru PAS di Taman Bukit Permata, Sri Gombak Fasa 8. Alhamdulillah, cawangan PAS semakin banyak di Gombak tanda semakin ramai orang bersama PAS. -fb pemudapasgombak
Posted: 17 Mar 2013 09:46 AM PDT
Some non-Malays PKR leaders and members are now disgruntled at how Anwar manages the party, especially the allocation of Parliament and State seats to them.
They were discontented that not many non-Malays from PKR will contest in the upcoming general election,asign that 'Anwar wants to make PKRapurely Malay party'. Is that so?
"This isamost unpleasant situation with racial overtones. Not all who have been dropped are Chinese but most are Chinese. The Malays in PKR are now also very concerned. Who will be next?"
"At the end of the day, it's the way they make decisions at the top. It is just like the BN. PKR is the new Umno and DAP the new MCA. Anwar talks about creatinganew Malaysian identity but when push comes to shove, he sells out his own members. You can't blame them for being angry because they spent the past4years investingalot of time and money to buildafollowing in their designated constituencies. But it is Anwar's betray that really hurts..."
They also believed Anwar has decided to rely on the DAP to bring in the Chinese vote. PKR insiders pointed at the way he had 'sold out' on the Ipoh Timur, Tapah, Tanjung Malim, Johor Bahru and even the Batu Pahat seat, which was due to be contested by Syed Hamid Ali, the brother of former deputy president Syed Husin Ali.
"If you look at the affected seats, it is not just about Johor or Gelang Patah. Most of us are not happy. Perak is affected and so is Pahang. But Johor PKR in the limelight because they are fighting back. We can understand if Anwar replaces lousy candidates with big names who have proven track records. But look at Gelang Patah. Jui Meng has just as goodachance, if not better, of winning than Kit Siang there."
Malaysia Chronicle has the story...
Posted: 17 Mar 2013 09:37 AM PDT
Penyanyi rock terharu serah borang PAS
KUALA LUMPUR: Vokalis kumpulan FTG (Freedom That Gone), Tajul terharu apabila dapat menyerahkan sendiri borang permohonan keahlian PAS kepada Timbalan Presiden parti itu, Mohamad Sabu.
Tajul atau nama sebenarnya Tajul Isni Akbar mengisytihar menyertai PAS pada program 'Malam Seni Untuk Perubahan' di Padang Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru malam tadi sebelum menyerahkan borang kepada Mohamad di hadapan kira-kira 5,000 hadirin.
Tajul, 46, turut mengakui beliau sudah lama mengikuti gerakan Reformasi dan mempunyai ramai kawan di kalangan ahli PAS dan PKR.
Malah katanya, beliau sering hadir ke program melibatkan parti politik namun belum bersedia untuk 'menonjolkan diri' ketika itu.
"Gerakan reformasi ini tidak asing bagi saya. Dari dulu lagi saya dan beberapa kawan yang lain memang menyokong perjuangan rakyat.
"Saya pun ramai kawan di kalangan orang PAS, PKR dan mereka selalu ajak saya pergi ke program-program mereka.
"Sekarang ni dengan umur macam ini, saya rasa sudah sampai masanya saya ke hadapan dalam perjuangan. Saya pun tak sangka dapat serahkan borang kepada Abang Mat malam tadi," katanya ketika dihubungi Harakahdaily hari ini.
Bapa kepada dua cahaya mata itu juga berkata, beliau akan meneruskan aktiviti nyanyian dan penulisan lirik dan tidak akan menolak jika diundang membuat persembahan di program melibatkan Pakatan Rakyat.
"Kalau mereka jemput saya, tak ada aral saya akan datang. Saya tahu apa yang saya buat ini betul, saya tahu mana yang baik, mana yang buruk.
"Yang baik kita sokong, yang buruk kita tentanglah. Sampai bila kita nak tengok rakyat ditindas.
"Pada saya, semuanya bergantung pada hati dan niat kita," jelasnya sambil menambah beliau selalu membeli akhbar Harakah dan Suara Keadilan untuk mengetahui isu semasa.
Beliau juga menyeru rakan-rakan artis agar berani menyatakan pendirian kerana yakin rezeki itu datang daripada Allah.
"Rezeki itu dari Allah. Kepada kawan-kawan, saya mohon tolak ke tepi sifat takut ke depan untuk berjuang," katanya yang berasal dari Ipoh.
Tambah beliau juga, beliau akan pulang mengundi di Ipoh walaupun menetap di Kajang.
FTG merupakan kumpulan Thrash Metal yang ditubuhkan pada tahun 1989.
FTG bergerak secara underground dan pernah melakukan ratusan konsert di seluruh negara dan popular dengan lagu 'Malaysia Maju'. -HD
Posted: 17 Mar 2013 07:28 AM PDT
ဒါလားကွ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်၊
ဒါလားကွ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊
ဒါလားကွ မင်းတို့ပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ။
ရွံတယ်ကွာ ——— ထွီ!
Posted: 17 Mar 2013 07:27 AM PDT
Haris Ibrahim, on January 4, 2013, posted:
Yesterday, The Malaysian Insider reported:
Cecil Abraham did PI Bala's second SD, says Americk
Posted: 17 Mar 2013 07:04 AM PDT
Source: NY Kogyi Rakhine A Myo thar , Leader Dr. Shwe Luu Maung explained about Rohingya and Arakan . He admit that Rohingyas are from Burma (Myanmar) . watch this video , you will understand who's behind all these misserable life in Arakan . He was well known leader of Rakhine People , please share this video as much as possible. —
Posted: 17 Mar 2013 06:40 AM PDT
60 old folk benefit from free health tests at temple
MORNING market-goers were happy to get free blood glucose and pressure tests at the Tua Pek Kong Temple in Air Itam, Penang.
The tests for senior citizens, aged 55 and above, were held in conjunction withadiabetes awareness campaign organised by the Penang Diabetic Society.
Society president Ronnie Teoh said pro-active measures were taken by the members to provide free health screenings to people in residential areas.
"We will organise similar events in other constituencies in the near future," he said, adding that the free tests benefited some 60 people last Sunday.
Also present, Air Itam assemblyman Wong Hon Wai said the campaign was held to increase health awareness especially among senior citizens.
Housewife R. Satna, 59, was happy with the free health screenings offered by the non-governmental organisation.
"I found out about the campaign several days ago from my neighbours. Thus, I decided to fast for the blood glucose test," she added.
Posted: 17 Mar 2013 06:33 AM PDT
As reported in China Press.
Ketua Penceroboh Sulu bolos bukti perairan negara mudah ditembusi
BAGAN SERAI 17 MAC: Bekas Panglima Angkatan Tentera Darat, Jen (B) Tan Sri Md Hashim Hussein mempersoal tahap pertahanan negara berikutan perairan negara khususnya di Sabah, terlalu mudah ditembusi.
"Ikut media arus perdana, ada dua bot keluar dari perairan kita. Maknanya bolos dan hanya dicekup tentera laut Filipina. Jadi, Orang masuk pun bolos, orang keluar pun senang-senang sahaja.
"Itu sebab saya kata, mungkin ada agenda tersembunyi yang kita tak tahu," katanya yang meminta lebih 5,000 hadirin menjawab sendiri persoalan itu, ketika berucap pada Jelajah Merdeka Rakyat di Bagan Serai, Perak malam kelmarin.
Beliau merujuk kenyataan Panglima Angkatan Tentera, Jeneral Tan Sri Zulkifeli Mohd Zain yang mengesahkan Ketua Penceroboh Sulu, Azzumudie Kiram melarikan diri ke selatan Filipina 15 Mac lalu.
Hashim yang pernah berkhidmat di Sabah hairan berikutan berlaku pencerobohan di Lahad Datu yang disifatkannya tidak harus berlaku kerana sistem pertahanan negara berlapis-lapis hingga sukar ditembusi.
"Kita buat berlapis. Kumpulan paling rendah sekali – infantri, keupayaannnya terbatas. Mereka jaga di tepi pantai, dilengkapi peralatan untuk awasi kawasan hadapan.
"Itu lapisan pertama. Dan kita ada bot-bot tempur yang boleh meronda kawasan laut. Lapisan kedua, kawasan laut luas ditugas kepada TLDM dan TUDM untuk buat pengawasan.
"Lapisan ketiga sebelum sempadan antarabangsa, kapal terbang dan bot besar ditempatkan di lautan luas. Jadi berlapis-lapis dan diperkuat pula dengan radar – boleh kesan musuh," katanya.
Hashim berkata, Angkatan Tentera Malaysia (ATM) memiliki peralatan canggih dan mahal tetapi mempersoal sama ada ia dibeli dengan harga tinggi tetapi tidak berfungsi kerana kualitinya rendah.
"Mungkin juga rosak sebab kurang diselenggara. Mungkin, alat ganti tak ada, tak dibeli. Kontraktor tahu bekal sahaja. Rosak, selenggaraan, bukan dia kira," katanya.
Beliau bertugas bersama ATM selama 38 tahun dan pernah bertugas di Sandakan, Sabah; Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Islamabad, Pakistan dan Pegawai Kanan di Wisma Putra serta pernah berkhidmat di Bosnia.
Posted: 17 Mar 2013 04:30 AM PDT
Sitting in your living room in your harem pants, feeling all "zen - like" sipping your green tea. Does this sound like you? Green tea has become the latest fad. It's healthy and it makes you feel sophisticated to some degree. You may have even heard that drinking green tea is an effective way to lose weight. So is green tea really healthy and do you really lose weight from it? In this article, we discuss all the health benefits of drinking green tea.
Green tea has many ingredients in it such as caffeine, theobromine, saponins, theophylline, vitamins and epigallocatechin.
Thermogenesis creates heat in the body, which increases your metabolic rate.
The compound Epigallocatechin (EGCG) boosts your metabolic rate and reduces yours appetite.
Drinking tea has been around for ages, but it is only in recent times that the real health benefits of drinking green tea have been explored. The main health benefits of drinking green tea come from the antioxidants that it contains.
1.These antioxidants are said to be active contributors in fighting all types of cancers.
2. Cholesterol is another disease that green tea combats. Green tea helps keep your arteries healthy and unblocked, which will help prevent heart attacks.
3. Green tea also regulates blood sugar. Green tea keeps your body hydrated, and it does wonders for your skin.
Posted: 17 Mar 2013 04:21 AM PDT
Here isamost interesting post I received fromareader on the recent search and rescue dog put down controversy.
Although he wishes to remain anonymous for reasons better known to him or her, I find that his (I'll call hima"he") engagement on the issue is the most matured that I've come across to date.
Here is what he wrote - and my reply to him. Don't forget to write in and
Posted: 17 Mar 2013 05:04 AM PDT
Dakwaan mengaitkan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kemasukkan penceroboh Selantan Filipina ke Lahad Datu, Sabah, oleh pemimpin Umno-BN dengan berpaksikan kenyataan media luar adalah satu bahan jenaka dunia.
Lebih-lebih lagi apabila juga terdapat kenyataan media dari luar Malaysia yang mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak yang sebenarnya dalang kepada kemasukkan kumpulan bersenjata Sulu ke Sabah.
Sepatutnya, sebuah kerajaan yang penuh kreadibiliti dan mempunyai agensi yang kukuh di bawah naunganya, hendaklah menjalankan siasatan mereka sendiri mengikut prosedur yang ditetapkan.
Ahli Parlimen Sungai Petani, Datuk Johari Abdul dalam reaksinya berkata, menggunakan media untuk membuat tuduhan adalah satu tindakan yang tidak profesional dan kerajaan sepatutnya mengemukakan bukti terperinci.
"Sekiranya Datuk Seri Anwar terlibat, maka dia boleh dakwa secara formal. Tidak mungkin kerajaan begitu hebat main tuduh-tuduh begitu sahaja.
"Ini kerajaan yang tidak bertanggungjawab kerana tuduhan ini adalah tuduhan yang serius, yang melibatkan keselamatan negara," katanya kepada TVSelangor.
Tegasnya, soal keselamatan negara merupakan perkara penting yang perlu diutamakan dan bukan menjadikan individu tertentu sebagai 'kambing hitam' untuk 'menyelesaikan masalah'.
Disebalik keghairahan pihak tertentu mengaitkan Anwar, beberapa 'bukti' yang mengkaitikan Najib dengan insiden Lahad Datu telah tersebar hangat di laman sosial.
Dalam sebuah artikel portal Manila Buletin Publishing Corporation "Don't Harm Sultan's Men, Nur Warns Malaysia", Pengerusi Fron Pembebasan Nasional Bangsa Moro (MNLF), Nur Misuari ada menyebut nama Najib.
"When he was in Jolo, Sulu, over the week, Misuari said that what he heard was that the group of the Crown Prince Rajah Muda Agbimuddin Kiram, younger brother of Kiram, crossed the sea to the island because they were allegedly promised to be settled in Sabah by Prime Minister Dato Seri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Addul Razak," rujuk portal berkenaan.
(Apabila dia berada di Jolo, Sulu, minggu lepas, Misuari berkata dia telah mendengar bahawa kumpulan Putera Mahkota Raja Muda Agbimuddin Kiram, adik Kiram, menyeberangi laut ke pulau itu kerana mereka mendakwa dijanjikan akan ditempatkan di Sabah oleh Perdana Menteri Dato Seri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Addul Razak.
) Carian Tv Selangor pada pautan
mendapati artikerl berkenaan masih wujud dan boleh diakses.
Sebelum ini, beberapa media pro-Umno mendakwa Anwar terlibat di dalam pencerobohan di Lahad Datu berdasarkan laporan media asing.
Ekoran itu, Anwar telah memfailkan tuntutan saman berjumlah RM 100 juta masing-masing terhadap akhbar Utusan Malaysia dan Stesen Televisyen TV3.
Posted: 16 Mar 2013 03:30 PM PDT
Call it fate, or destiny, butabasset hound named Ginger has been reunited with her owner after 10 years apart. Onawhim, Jamie Carpentier decided to check outawebsite he had never been on. He had recently lost his boxer and had decided not to get another dog, but something made him peruse the listings of dogs up for adoption at the Humane Society for Greater Nashua. That's where he saw the posting for the dog he hadn't seen in ten years, Ginger.
Carpentier got divorced 10 years ago, when Ginger was just3years old. His ex-wife had custody of the dog and unbeknownst to him had surrendered her for adoption not long after. Ginger was re-homed but recently her elderly owner could not care for her anymore and took her to the humane society, where she has waited for3months foranew home.
Posted: 16 Mar 2013 08:00 PM PDT
Fat under the belly button can be uncomfortable and unsightly. This area is oftenatrouble spot and can be difficult to address. By combining regular cardiovascular exercise withahealthy diet and specific exercises to target the problem area, you can reduce overall body weight and the fat under your belly button. Perform two to three sets of 10 to 20 repetitions of each lower-belly exercise on three nonconsecutive daysaweek.
The exercise works the muscles below your belly button and the upper abs and obliques. Begin inapushup position with your shins resting onalarge exercise ball. Your hands should be shoulder-width apart with legs together. Keeping your back straight and your abdominal muscles tight, pull your knees toward your chest, allowing the ball to roll forward down your shins. Squeeze your belly muscles at the end of the movement, then carefully roll the ball back to the starting position by straightening your legs.
Posted: 17 Mar 2013 12:57 AM PDT
Professor and Head of Medicine, MMU Dr. U Aung Gyi
"နောင်နှစ်ကိုလည်း တွေ့ကြမှာဘဲ စခန်းသိမ်းပွဲမှာလေ
အကိုတွေကလည်း အနုပညာ နဲ့ ချီးမြင့်ပါဦးမလေ
လူရည်ချွန် လူရည်မွန် ပြည်သူ့ သွေးသားတွေ
အနာဂတ်ပြည်ထောင်စု ကို ရှေ့ဆောင်ကြမဲ့ သားကောင်းသမီးကောင်းတွေ
အကိုကြီး ကိုအုန်းကျော် (အကော်ဒီယံ) ရဲ့ ချိုမြမြ ခပ်အေးအေး သံစဉ် ကို ဒီလို အချိန် ဒီလို ရာသီမှာ သတိရမိတယ်။ ဒီအချိန် ဒီရာသီ က ဘာများ ထူးခြားနေလို့တုန်း ကိုယ့်လူ ရဲ့။ ထူးခြားပါသော်ကောဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ အလယ်တန်း ကျောင်းသား ဘဝ အထက်တန်း ကျောင်းသား ဘဝ တစ်လျှောက် လူရည်ချွန် စာမေးပွဲတွေ ဖြေခဲ့ရတာ ဒီ အချိန် ဒီရာသီ ဖြစ်နေလို့ပေါ့။ ကျောင်းအဆင့် မြို့နယ်အဆင့် ခရိုင်အဆင့် အဆင့်ဆင့် ဖြေကြရ ပြိုင်ကြရတာ။ ဒီဇင်ဘာလဆန်းလောက် ကတည်းက ရေဒီယိုကနေ
"လူရည်ချွန် အရွေးခံမယ်၊ လူရည်ချွန်အရွေးခံမယ်။ နှစ်တစ်ရာတိုင် နှစ်တစ်သောင်း မညှိုးပန်း ဂုဏ် နှင့် သင်းပျံ့ထုံရနံ့ ကြွယ်" သီချင်းက လာနေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ တတွေ မှာ ရင်တမမ ဖင်တကြွကြွ။ အားကစား လေ့ကျင့်ကြ၊ ဗဟုသုတ မှတ်စုတွေ ပြန်နွေး ကြ။ လူရည်ချွန် ရဖူးသူတွေက နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ရဖို့။ တစ်ခါမှ မရသေးတဲ့ သူတွေ ကလည်း ဒီတစ်ချီ အပြတ်ခဲဖို့ ။ ကျားကုတ် ကျားခဲနွှဲကြရတာ။
ကျွန်တော်တို့ ကသာမှာ အဲဒီတုန်းက ကိုစိုးမြင့်က သုံးထပ်ကွမ်း လူရည်ချွန်။ နာမည် ကြီး။ နောက်ပိုင်း ကာလ တော်တော်ကြာတဲ့ အထိ သူငယ်ချင်းတွေကရော တခြား လူတွေကပါ သူ့ကို လူရည်ချွန် စိုးမြင့် လို့ ခေါ်ကြတော့တာ။ သူ့ထက် တစ်တန်း ငယ်တာ က မရီ။ သူ က နှစ်ထပ်ကွမ်း လူရည်ချွန်။ ကျွန်တော်က မရီတို့ အောက်က အတန်း။ ကိုစိုးမြင့် တို့ မရီ တို့ က ကျွန်တော်တို့ ဟီးရိုးတွေ။ နောက်မှတ်မှတ်ရရ သတိထားမိ တာက သန်းသန်းဝင်း။ သူက ဝိဇ္ဇာ ဘာသာတွဲ နဲ့ လူရည်ချွန် ရခဲ့တာ။ ဆံပင်ရှည်ကြီး ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် စည်းနှောင်ပြီး အိနြေ္ဒ ရရ လမ်းလျှောက်သွားတတ် တာ သတိရ မိတယ်။ နောင်နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာမှ သူ့ကို တီဗီ ဖန်သားပြင်မှာ သတင်း ကြေညာသူ အဖြစ် တွေ့ရပြန်ရော။ တို့နဲ့အတူ လူရည်ချွန် ရခဲ့တဲ့ တို့မြို့သူကွ လို့ ကြံဖန် ကြွားစရာ တစ်ခု တိုးလာတာပေါ့။ သူက စာရေးဆရာမ ငြိမ်း(ရွှေလီ) ရဲ့ ချစ် သူငယ်ချင်း။
သန်းသန်းဝင်း က လူရည်ချွန် စာမေးပွဲ နှုတ်မေးဖြေရာမှာ ဆရာတွေ လက်ဖျား ခါရ လောက်အောင် နှုတ်ရေးကြွယ်သူ။ သိုင်းသိုင်း ဝိုင်းဝိုင်း ဖြေတတ်သတဲ့။ သူ့ အားကျ ပြီး ကျွန်တော်လည်း သိုင်းသိုင်း ဝိုင်းဝိုင်း ဖြေချလိုက်တာ နောက်တစ်နေ့ ဆရာကြီး ကိုယ်တိုင် အိမ်လိုက်လာပြီး "မင်း နှယ်ကွယ် တိုတို တုပ်တုပ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြေရ မှာကို သိုင်းဝိုင်း နေတာနဲ့ ဘာဖြေနေမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး" လို့ ချီကျူး ထောပနာ ပြုခြင်း ခံလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီတော့မှ သူ့အရာ ကိုယ့်အရာ သူ့အထာ ကိုယ့်အထာ ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သဘော ပေါက်နားလည်သွားပြီး နောင် နှုတ်မေး စာမေးပွဲတွေမှာ ကိုယ်ဖြေတတ်သလို ပဲ ဖြေလိုက်ပါတော့တယ်။ သန်းသန်းဝင်း ရဲ့ communication စွမ်းရည်က ဒီကတည်း က "ဇ" ပြနေပြီ။ သူ့ ကို သန်းသန်းဝင်း လို့ ကျွန်တော် မခေါ်ထိုက်ပေဘူး။ သူက ကျွန်တော့ ထက် အတန်းကြီး အသက်ကြီး သူပါ။ အဂါရဝ ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါပေတဲ့ အဲဒီတုန်း က တစ်မြို့လုံးက သန်းသန်းဝင်း လို့ ခေါ်ကြတာကြောင့် အဲဒီခေတ်ရဲ့ အငွေ့အသက်ရ အောင် သန်းသန်းဝင်း လို့ ကိုယ့်အမကြီး ကို ခပ်တည်တည် ခေါ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရိုင်အဆင့် ရွေးပွဲမှာ ကျွန်တော့ အဓိက ပြိုင်ဖက် က ဝန်းသို က တင်ညွန့်။ သူ က စာလည်းတော်၊ အားကစား စွမ်းရည် ဖြေရာမှာလည်း စွမ်းသူ တစ်ဦး။ သူ ၇ တန်း ၈ တန်း ၂ နှစ် ဆက်တိုက် ဝင်ပြိုင်ရာ မှာ ကသာလူရည်ချွန် အရွေး မခံရလို့ ရွှေဘို ကျောင်း ပြောင်းသွားတယ်။ ၉ တန်း ၁၀ တန်း ရွှေဘို လူရည်ချွန် အဖြစ်ပါလာတော့ သူနဲ့ လူရည်ချွန် စခန်းမှာ ပြိုင်ဖက်မဟုတ်တော့ဘဲ သူငယ်ချင်း အဖြစ် ဆုံရပြန်တယ်။ သူ သွားဆေးကျောင်းတက် ဘွဲ့ရ၊ အပြင်စီးပွားရေးလုပ်၊ အခု ကွယ်လွန်သွားရှာပါပြီ။
လူရည်ချွန် ခရီးစဉ် ကာလ အပျော်ဆုံးက ၁၉၆၈- ၈ တန်း လူရည်ချွန်နှစ်။ အဲဒီနှစ်က တကယ့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်။ ၈-တန်း အစိုးရစစ်က အဲဒီနှစ်က စတာ။ ဖြစ်ချင်တော့ စာမေးပွဲ ဖြေကာနီးမှ ကပ်ပြီး ရခိုင်တိုင်း ဂွမြို့ကို သူပုန်ဝင်စီးတယ်။ သူပုန်ဝင်စီးရာက မဆီမဆိုင် ၈-တန်း စာမေးပွဲ မေးခွန်းတွေ ပါသွားသတဲ့။ တကယ်က ဘဏ်ဝင်စီးပြီး ငွေတွေ သိမ်းတော့ ဘဏ်မှာ အပ်သိမ်းထားတဲ့ မးခွန်းတွေ ပါသွားဆိုကိုး။ ဟုတ်မဟုတ် တော့ မောင်တင်လည်း မလျှောက်တတ်ဘူး။ တစ်ချို့ပြောကြတာ က မေးခွန်း ပေါက်နေတာ သိလို့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ဂွမြို့ သူပုန်ဝင်စီးတာနဲ့ ရောကျိတ် လိုက်တာ တဲ့။ သူပုန်တွေကတော့ တောထဲကနေ မဆိုင်တဲ့ အပေါက် ဂလိုင်နဲ့ ခေါက်သူတွေ ကို ကျိန်ဆဲနေမှာ မြင်ယောင်သေး။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ၈-တန်း စာမေးပွဲ ဖြေချိန်တန် မဖြေ လိုက်ရတော့ဘူး။
စာမေးပွဲကို သင်္ကြန် ပြီးမှ ဖြေရမှာဆိုတော့ သင်္ကြန်အတွင်း သူများပျော်လို့ မပျော်နိုင် ဖြစ်ရတယ်။ လူရည်ချွန်ခရီး က ကျောင်းစပိတ်ရာက စပြီး သင်္ကြန်မတိုင်မီ ပြီးတာ။ အဲဒီ ထူးခြားဖြစ်စဉ်နှစ်မှာတော့ သူများအဖွဲ့တွေ ပြန်လာပြီး မှ ကျွန်တော်တို့ ၈-တန်း လူရည်ချွန်တွေ စထွက်ရတယ်။တစ်တန်း တည်းဆိုတော့ တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး တော်တော် ရင်းရင်းနှီးနှီး ခင်ခင်မင်မင် သိကြ ချစ်ကြ မုန်းကြပေါ့။ မုန်းတယ်ဆိုတာ စကား အဖြစ် ပြောလိုက်ရတာပါ။ မုန်းဖို့နေနေသာသာ ရန်ဖြစ်တာတောင် မရှိခဲ့ပါဘူး။ စခန်း က ခေါင်တိုင် (အင်းလေး)။ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း စရောက်ဖူး။ ဘဝသံသရာ တံတား စဖြတ်ဖူး။ ပိုးနသံကောင် လို ရှည်ရှည်လျားလျား မီးရထားကြီး တောင်စောင်း တစ်လျောက် ကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့ သွားနေတာ ၈-တန်း ကျောင်းသားလေးရဲ့ ရင်ထဲ ခုထိသိမ်းဆည်းထားတုန်း။ မိန်းကလေးတွေ က ရထားရှေ့ပိုင်းထိုင်ကြရတာ။ ရထားအကွေ့တွေမှာ သူတို့က နောက်လှည့်အကြည့် ကျွန်တော်တို့က ရှေ့အမျှော် မျက်လုံးချင်းဆုံမိသလိုလို။ ရင်ခုန်ချင်သလိုလို။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း တောခိုး တောင်ခိုးတွေ တခါတရံ ဝေ့လို့ လွမ်းလောက်ပေသည် ဆိုတဲ့ အနေမျိုး။တခါ တခါ မီးရထား ရွေ့ရာ ငေးရင်း မျက်ရည်ကျလာတာတောင် ရှိတယ်။ မီးရထားက ထွက်လာ တဲ့ မီးခိုး နဲ့ ကျောက်မီးသွေးမှုံ့လေးတွေ မျက်စိထဲ ဝင်သွားလို့။ ဒီလိုတွေးရင်း ငေးရင်း စခန်း ရောက်သွားခဲ့။
အင်းလေးကန်ကြီး ထဲ စက်လှေတွေ နဲ့ လည်ပတ်ကြ။ ဖောင်တော်ဦး ဘုရား။ အင်းထဲ က ရက်ကန်းလုပ်ငန်းတွေ။ ရွာမ ကျေးရွာ။ ကျွန်းမြော။ ငါးဖိန်း။ လူသေအလောင်း ကို ရေထဲ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း။ အင်းရေပြင်မှာ လှေလောင်း နဲ့ သွားလာကူးလူးနေသူတွေ။ ကြည်လင်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ အင်းသူလေးတွေ။ စခန်းအနီးတောင်ကုန်းပေါ်က ဘုရား။ အားလုံးဟာ စွဲထင်လွယ်တဲ့ သူငယ်တစ်ဦး ရဲ့ စိတ်ရင်ပြင်ထဲ ခဲခြစ်ရာထူထူ နဲ့ ရေးခဲ့။ စခန်းမှာ တစ်ရက် သီချင်းတိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတုန်း စန္ဒယား ကျော်ဇောလေး က သူ့ရဲ့ မာ(စ)တာပိ(စ) ဖြစ်တဲ့ "ချစ်၍ ချစ်ခါ လာသည်မှကွယ်" ကို ဆိုတီးလိုက်တာ အားလုံး လို လို မင်တက်မိကုန်ရော။ "မတတ်သာလို့ ခပ်ခွာခွာ နေကြသော်လည်း အသည်းချင်းဖြင့် ဆုံကြတုန်း အသည်းချင်းဖြင့် နီးကြတုန်း ခွဲခွာခြင်းဖြင့် တစ်သက်လုံး မနေလိုတယ်" ဆို တာနဲ့ ပိတ်လိုက်တော့ အားလုံးမျက်လုံးတွေ ဝေရီရီ။ ဒါနဲ့ တက်ကြွ လူငယ့်တေးသံတွေ ဆိုရင်း ဝေ့လာတဲ့ မျက်ရည်တွေ ကို တိုက်ထုတ်ရပေါ့။ဆရာမင်းသုဝဏ်ရဲ့ "အလွမ်းရယ် တဲ့ ဆယ့်နှစ်ထွေ" ကို သတိရစရာ။
အနီးအနားတစ်ဝိုက်က ဗထူးတပ်မြို့သွားလည်တာ မှတ်မှတ်ရရ။ ဗထူးမှာ တစ်ည အိပ်ရတယ်။ နွေရာသီမှာတောင် အလွန်အေးတာ သတိပြုမိ။ ဗထူးမှာ စခန်းချတုန်း ညနေခင်း ကျွန်တော်ရယ် မကွေးက မျိုးညွန့်ရယ် နောက် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးရယ် အိမ်သာက အပြန် လမ်းမှာ ပေါက်တတ်ကရ သီချင်းတွေ ဆိုပြီးပြန် လာတာ ဆရာ တစ်ယောက် က လှမ်းဟန့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ တတွေထွက်ပြေးကြ ရတာ မှတ်မိသေတော့။ စခန်းမှူးက ဆရာကြီး ဦးသိန်းနွဲ့။ စကားပြောရာ ဆုံးမရာမှာ အလွန်သိမ်မွေ့တာ။ ကျွန်တော်တို့ကို လူငယ်ပီပီ ပျော်ပျော်ပါးပါး လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေစေ့ချင်တယ်။ တစ်ဖက် ကလည်း စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ရှိစေ့ချင် တယ်။ လောကကြီးမှာ ဒီလိုနေလို့လည်း ရပါကလားလို့ စသိလိုက်ရချိန်။ ဗထူးတပ်မြို့ တစ်ခွင် လေ့လာရေးသွားတော့ တင့်ကားတပ်မ တစ်ခုမှာ အောင်ဆန်းသူရိယ လှသောင်း နဲ့ အတူတူ တိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုသူ တပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦး နဲ့ ဆုံရ သေးတယ်။ တင့်ကားကြီးတွေကို လက်နဲ့ အရှင်လတ်လတ် ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ် ရတာ အရသာရှိလိုက်တာ။ ဟိုတုန်းက တင့်ကားဆိုတာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ နဲ့ စာအုပ်ထဲ မှာသာ မြင်ဖူးခဲ့တာ။
ရှမ်းပြည်ကို သဘောကျ တာက စိမ်းစိုနေတာ လေက သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တာ လမ်းတွေက နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက် သွားနေတာ။ ပြီးတော့ စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတွေ စိတ်ကူးရောင်စုံ ခြယ်ပေးထားတာ။ ဒါ့ထက် ပိုအရေးကြီးတာက အတူတူ ခရီး သွားရတဲ့ ရောင်းရင်းတွေ။ ဒီလူတွေက ဒီခရီးကို "မမေ့ရက်နိုင်" ဖြစ်စေတာခုမှ တွေးမိတယ်။ "မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း နှင့် ခရီးသွားခြင်း" ပေပ။ ခင်ဦးက သန့်လွင် ဆိုရင် သီချင်းလေး တအေးအေးနဲ့ အတည်ပေါက် နောက်တတ်တာ။ သူ့ ကိုယ်ပိုင်သီချင်းက "လက်သုံးတော် ဓားကိုလ ယောင်မှားကာကိုင် . . . ငိုင် . . . ငိုင် . . . ငိုင် . . . "။ ဒါပဲ။ လူရည်ချွန်မိန်းကလေးတွေ ထဲက မန္တလေးက ခင်ဆွေမြင့်၊ သထုံက ခင်သန်းအေး တို့ကို မှတ်မိနေတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး ပုတုတု။ (စကားတော့ ပီရှာပါတယ်၊စကား ဝုတာက ကျွန်တော်) နောက်တစ်ယောက်က လဲချားသူ နန်းခင်မေဖူး။ သူကတော့ ချောလို့။
ကျောက်ဖြူ က ခင်မောင် နဲ့ တိုက်ကြီးက စိုးသန်းက အင်္ကျီအရောင် တောက်တောက် ကြီးတွေ ဝတ်တတ်တာ။ ခင်မောင် က အသံ ဟောင်ဖွာ ဟောင်ဖွာ ပြောတတ်လို့ သူ့ကို ကျွန်တော် အစ က သိပ်ကြည့်မရဘူး။ နောက်တော့ ဘယ်လိုက ဘယ်လို ခင်သွားမှန်း မသိ လိုက်ဘူး။ ရန်ကုန်စခန်းကနေ ကိုယ့်နေရပ်ဌာနေ အသီသီး ပြန်ကြရာမှာ သူက လေယာဉ်နဲ့ ကျောက်ဖြူ ပြန်၊ ကျွန်တော်တို့ က မီးရထားနဲ့ မန္တလေး အဲဒီကမှ တဆင့် ကသာပြန်ရတာ။ သူ့လေယာဉ်က နေ့လည်ပိုင်းထွက်တာဆိုတော့ သူ မနက်ကတည်း က စခန်းက ထွက်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ က ညရထားနဲ့မှ ထွက်ရမှာ ဆိုတော့ အဆောင်မှာ ပျင်းပျင်းရိရိ ကျန်နေရစ်တယ်။ မနက် ၁၀ နာရီလောက်မှာ စခန်းရုံး က လူရည်ချွန် မောင်အောင်ကြီး ဖုံးလာတယ်၊ စခန်းရုံးမှာ လာကိုင်လှည့်ပါ လို့ အော်ခေါ်သံ ကြားလိုက်ရတော့ ရင်ထဲ ထိတ်ခနဲ။ ဘာများ ပါလိမ့်။ ဘယ်သူများပါလိမ့်။ ကျွန်တော့်ဆီ ဘယ်သူ့ဆီက ဘာဖုံးမှ လာစရာ မရှိတာ ကျွန်တော်အသိ။ မကိုင်တတ် ကိုင်တတ် ဖုံးပြေးကိုင်လိုက်တော့ တဖက်က ခင်မောင် ရဲ့အသံကြီးကြားလိုက်ရတယ်။ "ငါ ကောင်းကောင်းမကြားဘူးကွ" ပြောလိုက်တော့ တဖက်က ငိုသံပါကြီး နဲ့ အော်ပြော နေတဲ့ ခင်မောင့် အသံ ကျယ်ကျယ်ကြီး ကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။ တကယ်က ကျွန်တော်က ဖုံးမကိုင်ဖူးတော့ ဖုံးနဲ့ နားနဲ့ ဝေးနေလို့ အစ က ကျယ်ကျယ် မကြားရတာ။ "ဟေ့ကောင် ကြားပြီ ပြောတော့" ဆိုလိုက်တော့ "မင်းကို သတိရလို့ ဆက်လိုက်တာ" တဲ့။ "ဟ ကောင် မင်းပိုင်လှချည်လား" ပြောတော့ လေဆိပ်ရုံးခန်းမှာ အကူအညီ တောင်းပြီး ဆက်လိုက်တာတဲ့။ လေဆိပ်ဖုံး သုံးဖို့ဆိုတာ အဲဒီခေတ်က လွယ်လွယ် ကူကူ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။ လူရည်ချွန် အရှိန်အဝါ ကို ခင်မောင် အပြည့်အဝ အသုံးချ လိုက် ဟန်တူတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လူရည်ချွန်တွေကို နိုင်ငံတော် က ရိုရိုသေသေ ချီးမြှောက်ဂုဏ်ပြု ခဲ့တာ တော်လှန်ရေးကောင်စီ နဲ့ လမ်းစဉ်ပါတီခေတ် တိမ်ပုပ်တိမ်မဲတွေ ထဲက ငွေနားကွပ် တွေပေလား လို့ ထင်စားမိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တတွေ သွားလေရာ လာလေရာ မှာ လူထုလူတန်းစား ပေါင်းစုံက သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုကြ။ နိ်ုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ကိုယ်တိုင်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ဂုဏ်ပြု ညစာစားပွဲ နဲ့ ဧည့်ခံ။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း လေ့လာရေး အစီအစဉ်တွေ သွားရင် ရှေ့ကယာဉ်ထိန်းရဲ ဦးဆောင်လို့။ ကားတွေအားလုံး ရပ်ပေးကြ။ နောက် ငွေနားကွပ်တစ်ခု က အသုံးလုံးကျေ လူထု လူတန်းစားပေါင်းစုံ လှုပ်ရှားမှုကြီး။ ခေတ်တိုင်းခေတ်တိုင်း အကောင်း အဆိုး အကျိုးအပြစ် ဒွန်တွဲလို့။ ကောင်းတာတွေ ဆက်လက်သယ်ယူဖို့။ မကောင်းတာတွေ စိစိစစ်စစ် လုပ်ပြီး ပညာယူဖို့။ အခုလည်း "ခေတ်ရဲ့ရှေ့ပြေးကောင်းနိမိတ်တွေ" ဖြစ်တဲ့ လူရည်ချွန် စီမကိန်း ကို ပြန်လည်ဖော်ဆောင် အသက်သွင်းတော့မယ် ဆိုတဲ့ သတင်း စကား ကြား လိုက်ရတော့ ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ အပထား ကျွန်တော်တော့ ၁၉၆၈ ခုနှစ် ၈-တန်း ကျောင်းသား ဘဝ အပြေးအလွှား ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားတာနဲ့တင် တန်လှပြီ ဖြစ်ပါ ကြောင်း မိတ်ဆွေအပေါင်း တို့ရေ။
Natural Resources must be exploited. If not and just left in the ground, no use and no benefit for anyone.
In Australia 40% of tax from mining industries were given back to local community/districts. Any NGO or Voluntary organization or MP can put up the project and ask for: school, daycare centre, repair road and bridges, library, town hall etc…
If Myanmar could follow this kind of procedure all the effected people would be happy.
In Malaysia: when Gov took (grasp) lands from farmers for new capital Putra Jaya: Federal government gave RM 400 million to the State government as compensation. And the effected famers and settlers were given enough compensation by Fed government. Problems popped out not because of the government but because of the farmers' sudden found wealth with the handsome amount of compensations they received: they bought condominiums,4wheel drive luxury vehicles and some of them marry another wives.
Those farmers whose lands were not confiscated by the government were angry and there were assaults on local village authorities and land officers…
So Myanmar government, military and U Paing should copy these to please the effected people and to enrich them with compensations and development projects but not to be just so greedy and grab all the benefits for themselves.
It is not good to cancel foreign treaties or agreements especially the FDIs. Charge them with other way round tactics eg taxes or administrative duties and local licenses etc.
How can we develop our resources If the Foreign Investors lost trust on our country?
What use if we just sit on the Lapadaung hill or land,? We need to mobilize or commercialize or exploit countries' resources for the benefit of the people and our country, not only in the name of the "country" (to be used or misused by leaders) or by any party.
But U Paing needs to share or pay the people who are affected. Previous Military government had given all the rights to their own organization, ex-military U Paing. Not fair in any International Law or Humanitarian or Just Laws. They could continue to operate but profit must be shared with the people.
အတီး ဝါးလုံးရှည်'s photo.
"ချော့ကလက် လက်ပတောင်း ၊
ဇာဘုရင် ဦးသိန်းစိန် နဲ့ဖေ့ဘုတ်ပေါ်က ဘော်ရှီဗစ် ပြည်သူများ၊"
ပုံမှာ မြင်နေရတာကတော့ ချော့ကလက် တောင်ကုန်းလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ တောင်ကုန်းတွေပါ၊ ဒီချော့ကလက် တောင်ကုန်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားမရှိလှပဲ မြေကျစ်စာပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ ဒီလို ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ရိုးစင်းလှပြီး အရေ အတွက် ထောင်ကျော် ရှိတဲ့ မြေစာပုံတွေနဲ့ လှပတဲ့ နေဝင်ချိန်ကို ကြည့်ရှူခံစားနိုင်ဖို့ ကမ္ဘာအနှံ့က ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို တကူးတက ငွေကြေး ကုန်ကျခံကာ လာရောက်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီ မြေစာပုံတွေကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ မီးခိုးမထွက်တဲ့စက်ရုံ ဖြစ်တဲ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းကနေ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ သန်းချီဝင်ငွေရရှိနေပြီး ဒီဒေသဟာ လည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလည် အပတ် သွားဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်လာပြီး တစ တစ နာမည်ကျော်ကြားလာလျှက် ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာ ဒီဒေသဟာ အခု အချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွေကနေ ပြီး ဒေသခံတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်ကောင်းတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကတော့ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပြောလို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မဟုတ်သလို မုံရွာက တောင်တွေဟာလည်း ချော့ကလက် တောင်ကုန်းတွေ မဟုတ်ပါ။
အမြဲတမ်းပြောင်းလဲ နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဒီလို(Paradigm )ပါရာဒိုင်း အပြောင်းအလဲတွေ၊ စဉ်ဆက် မပြတ် တော်လှန်ရေးတွေက ဖြစ်ပေါ်နေဆဲ၊ ဖြစ်ပေါ် လာဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော့ အမြင်ကတော့ ဒီလို ပြောင်းလဲ လာတဲ့ ပါရာဒိုင်း တွေကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ရင်း ကိုယ်က လိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင် လိုက်ပြောင်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ လိုက်မပြောင်းနိုင်ပဲ တင်းခံနေတဲ့ လူတွေပဲ ကျန်ရစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပါရာဒိုင်းကတော့ လူတွေကို မစောင့်ပဲ ပြောင်းမြဲပြောင်းနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
"ဒို့ တစ်သက်လုံးဒီလိုနေလာတာ အခုမှတော့ မပြောင်းနိုင်ပါဘူး" " တောင်ကြီးကိုပဲ ပြန်လိုချင်တယ်" ဆိုတဲ့ စကားတွေကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ် နဲ့ နားလည်ပေးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
လူသားဆန်တဲ့ လူချင်း ကတော့ ဒီလို နားလည်မှူပေး သနားစိတ်မွေးနိုင်ကျပေမဲ့ ပါရာဒိုင်း အပြောင်းအရွှေ့ကြီးကတော့ လူသားမဟုတ်တဲ့ အတွက် ဒီလို နားလည်နိုင်မှူ မပေးနိုင်ပါဘူး။
ပါရာဒိုင်း နောက်ကိုမလိုက်နိုင်တဲ့သူတွေများနေသေးတယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီ နိုင်ငံ အဲဒီဒေသ က အရင်လိုပဲ ဒုက္ခတွေ များနေဦးမှာပဲလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
ဥပမာ အနေနဲ့ ပေးရရင်တော့ တူရကီ စစ်တပ် က အမြင်သာဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်အခြေအနေ အရ ပြောင်းလဲဖို့ လိုလာပြီဖြစ်တဲ့ တူရကီ စစ်တပ်ရဲ့ ယူနီဖောင်းနဲ့ သေနတ်တွေကို ပြောင်းလဲဖို့ အမြှော်အမြင်ရှိသူတွေက ထောက်ပြတာကို လက်မခံပဲ ရွှေရောင်လွှမ်းခဲ့တဲ့ ကာလတွေမှာသာ မိန်းမောရင်း ရှေးတူရကီရိုးရာ ဝတ်စုံ ကိုသာ ဖက်တွယ်ခဲ့တဲ့ တူရကီ ရဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ အင်တိုမန် အင်ပါယာကြီး တစစီပြိုကွဲပြီး ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးစူပါပါဝါ နိုင်ငံအဆင့်က နေနိုင်ငံငယ် တခု အဆင့်ကို လျှောကျသွားဖို့ အကြောင်းအရင်းများအနက်မှ တခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ပါရာဒိုင်း အပြောင်းအရွှေ့ကို မလိုက်နိုင်လို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူတွေပါ။
နောက်တခုက ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံပါ။ အဲ သူကတော့ မကျန်ခဲ့ဘူးခင်မျ၊ မမှီတမှီလေးနဲ့ လိုက်သွားနိုင်ပုံရပါတယ်၊ ဆွစ်ဇာလန် ထုတ် နာရီတွေဟာ ခွေးသွားစိတ်လေးပေါင်းများစွာနဲ့ အရမ်းကိုတိကျပြီး ခိုင်ခန့်တဲ့ နာရီဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာကျော်ပြီး နာရီလုပ်ငန်းဟာဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံရဲ့ အဓိက ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းပါ။
ဒီလိုနဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာဆိုတာကြီးက ပေါ်ထွက်လာပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ် ဂဏန်းတွေနဲ့ နာရီထုတ်လုပ် နိုင်တယ် ဆိုတာကို မြင်တဲ့သူတွေက ဆွစ်နာရီလုပ်ငန်းတွေကို ဒစ်ဂျစ်တယ် နာရီတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့ တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများက လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ နာရီဆိုတာမျိုးဟာ ဒီလို မဖြစ်သင့်ဘူး၊ မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးလို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ဒစ်ဂျစ်တယ် နာရီလုပ်ငန်းကို ဂျပန်က သိမ်းပိုက်သွားခံပြီး ဆွစ်နာရီလုပ်ငန်းတွေ လည်း အကြီးအကျယ်အရှုံးပေါ်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးတွေ အသေအလဲလုပ်၊ ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံရဲ့ လှပတဲ့ ရှူခင်းတွေနဲ့ မက်လုံးပေးပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားရပါတော့တယ်၊
ဒီလို နဲ့ပဲ အမှီလိုက်သွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊အခုဆိုရင် ဥရောပတိုက်သားတွေဟာ အားလပ်ရက်များရရင် ဆွစ်ဇာလန် မှာ နှင်းလျှောစီးဖို့ တာစူနေကြပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူနေမှူ အဆင့်အတန်း အမြင့်မားဆုံး နိုင်ငံစာရင်းထဲမှာ ထိပ်ကပါဝင်အောင် ရပ်တည်နေနိုင်ပါတော့တယ်။
ပြောင်းမဲ့ ပါရာဒိုင်းကို ကြိုမြင်ပြီး အခုကတည်းက ကြိုးစားအားထုတ်မှူတွေ တသီတတန်း လုပ်နေကြတဲ့ နိုင်ငံတွေက တော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက နိုင်ငံအချို့နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှမှ စင်္ကာပူ နိုင်ငံငယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
တွက်ချက်မှူတွေ အရ သဘာဝ ကပေးတဲ့လက်ဆောင် ရေနံ သယံဇာတတွေဟာ ၂၀၅၀ ကျရင် ကုန်ခန်းတော့မှာ ဖြစ်တဲ့ ရေနံမရှိရင် တိုင်ပတ်တော့မှာ ကြိုမြင်နေတဲ့ အာရပ်သူဌေးတွေဟာ အခုကတည်းက သဘာဝ မဟုတ်တဲ့ အပြင်အဆင်တွေကို ငွေကြေးဒလဟောသုံး အဆောက်အအုံ ဟိုတယ်ကြီးတွေဆောက်ပြီး ရေပေါ်ဆီလူတန်းစားတရပ်ကို မြှူဆွယ်လို မြှူဆွယ်၊ ပရီးမီးယား ဘောလုံးအသင်းတွေ ပစ်ဝယ်တာတွေ လုပ်ပြီး ပါရာဒိုင်း အပြောင်းအလဲကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ၊ လူကလွဲလို့ ဘာအရင်းအမြစ်မှ မရှိပဲ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆိပ်ကမ်းကိုသာ အားထားနေရတဲ့ စင်္ကာပူ နိုင်ငံငယ်လေးဟာ လည်း အစပြုလာပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို မျက်ခုံးတလှုပ်လှုပ်နဲ့ စောင့်ကြည့်နေပြီး အခြေအနေ မကောင်းပါက လူသာ အရင်းပြုရတဲ့ ပွဲစားလုပ်ငန်း၊ လို ပညာရေးလိုလို ကာစီနိုပဲ ထောင်တော့မလိုလို နဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ရင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကို သတိပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီအပိုင်းကိုတော့ စလုံးရောက် ရွှေမြန်မာများ ကျွန်တော့ထက်ပိုပြီး ရေလည်အောင် ရှင်းပြနိုင်မှာဖြစ်လို့ အကျယ်တဝင့် မရှင်းလင်းတော့ပါဘူး။
စကားမစပ်ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဘုရင်ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ ကျွဲခတ်လို့ နတ်ရွာစံခဲ့ရတဲ့ အနော်ရထာ ဘုရင် ကြီးဆိုတာရှိတယ်ဗျ၊ ဘုရင် ဆိုတဲ့ အဆင့်အတန်းနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှူ မရှိစွာ လမ်းဘေးမှာ သောင်းကျန်းနေတဲ့ ကျွဲဆိုးကို မှူးမတ်တွေရဲ့ စကား နားမထောင်ပဲ ကိုယ်တိုင် နှိမ်နင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့လို့ ကျွဲရဲ့ ချိုဖျားမှာ အသက်ပါသွားခဲ့တဲ့ ဘုရင်ကြီးပါ။
ကျွဲရိုင်းလောက်ကို နှိမ်နင်းဖို့ သူရဲကောင်းတွေ အများကြီးရှိပါရဲ့သားနဲ့ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စကို ဟိုးအောက်ခြေထိ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့လို့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ၊ ဒီလို ပြောလို့ အမေ စုဟာလည်း အနော်ရထာ မဟုတ်သလို နောက်ကွယ်ကလူတစုဟာလည်း ကျွဲရိုင်းမဟုတ်ပါ။
အဲ ထိန်ပင်စောင့်နတ်ကြီး က ကျွဲယောင်ဆောင်ပြီး ဝင်မခတ်ဖို့တော့ သတိထားရပါ့မယ်။ဒီလို မဖြစ်လာပါစေနဲ့လို့လဲ ဆုတောင်းမိပါတယ်၊အခုလောလောဆယ်တော့ အမေစုကိုယ်တိုင်ရော၊ဒေသခံတွေကော၊ ဘေးမှမြင်ရသူတွေပါ စိတ်မချမ်းသာလှပါ။
မဆီမဆိုင် ဝင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့၊ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံး မင်းဆက်ဖြစ်တဲ့ ဇာဘုရင် မိသားစုတွေရဲ့အကြောင်းကို နည်းနည်းတင်ပြပါရစေ။
ဇာဘုရင် နစ်ကိုးလပ်စ် ဆိုတာက ဘုရင် မဖြစ်ချင်၊ ဖြစ်ချင်နဲ့ အတင်း မလွှဲမရှောင်သာလို့ ဘုရင်ဖြစ်လာရ သူပေါ့၊ တိုတိုပြောရရင်တော့ ဇာဘုရင် နန်းတက်ပြီး နှစ်နှစ် အကြာ မော်စကိုမြို့စွန်က ဧရာမကွင်းကြီးတစ်ကွင်းမှာလုပ်တဲ့နန်းတက်ပွဲ အထိမ်းအမှတ် ပွဲမှာ ဆင်းရဲသား ရူရှားပြည်သူတွေဟာ အစားအသောက်တွေ၊ လက်ဆောင်တွေ ရနိုးနိုးနဲ့ တိုးကြ၊ဝှေ့ကြရင်း လူ ၁၃၀၀ကျော် သေတယ်ဗျာ၊ ထောင်ကျော်လောက် ဒါဏ်ရာတဲ့ လူတွေ ဆေးရုံတွေမှာ ပြည့်လျှံကုန်တယ်။အဲသလောက် တိုင်းပြည်ပျက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဇာဘုရင်ဟာ အေးဆေးပါပဲ၊နန်းတက်ပွဲကို ဆက်လုပ်၊ ပြင်သစ် သံအမတ်စီစဉ်တဲ့ ညနေပိုင်းကပွဲမှာ ဦးရီးတော်ဖြစ်သူရဲ့ အကြံပေးချက်အရ ပြင်သစ် ရုရှား နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို အပျက်မခံနိုင်လို့ စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ သွားကနေရပါတယ်။
သူ့ဟာသူ " စိတ်ထဲကမပါပဲ ကက၊ တကယ် စိတ်ပါလို့ပဲ ကက ပြည်သူရဲ့အမြင်မကြည်လင်မှုကို ခံယူရင်း ဘုရင် စနစ်ကိုဖြုတ်ချ ခဲ့တဲ့ ဘော်ရှီဗစ် တော်လှန်ရေးကြီး အစပျိုးစေဖို့ မျိုးစေ့ချပေးလိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟယ် ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူး၊ တို့ ဦးသိန်းစိန်ကြီးကလဲ ဇာဘုရင် မဟုတ်သလို ကျွန်တော်တို့ ဖေ့ဘုတ် တော်လှန်ရေးသမားတွေကလဲ ဘော်ရှီဗစ်တွေမှ မဟုတ်တာ။
ကိုလိုနီခေတ်မှာ ဆရာစံဂဠုန် လယ်သမားတပ်တွေဘက်က မားမားမတ်မတ် ရှေ့နေလိုက်၊ပြီး လူထု အကြိုက်ကို ဆောင်ယူကာ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တော့မှ သခင်ပေါက်စတွေကိုဖမ်း၊အတိုက်အခံတွေကို နှိမ်ကွပ်၊ နောက်ဆုံး နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှူ တရားခံအဖြစ် ဇာတ်သိမ်းသွားရတဲ့ ဂဠုန်ဦးစော ဆိုတာ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။
ဟယ် ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူး။ ဒီလို ပြောလို့ ဟန်ဝင်းအောင်တို့က ဂဠုန်ဦးစောမဟုတ်သလို ဒေသခံတွေကလဲ တုတ်ပြီး၊ဓားပြီး တဲ့ ဂဠုန်တပ်သားတွေမှ မဟုတ်တာ။
ဘယ်လို ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပါရာဒိုင်း ဘာဒိုင်း ညာဒိုင်း စကားကြီးစကားကျယ်တွေ ပြောပြီး လျှောက်ပြောနေရပေမဲ့လဲ ဘာမှ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတော့တဲ့ ဒေသခံ ပြည်သူတွေကို စာနာမိသလောက် အဲဒီ ပြည်သူတွေကို မြောက်ပင့်အသုံးချပြီး နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ချင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတစုကို နာရင်းပိတ်တီးချင်တယ်။
ဒေသခံတွေထက် ပိုပြီး သနားဖို့ကောင်းတဲ့ လူတွေကတော့ ဘာခံယူချက်မှ မယ်မယ်ရရ မရှိ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှူ လွန်ကျူးပြီး စကားတလုံးကို ဘုရားဟောတမျှ ကိုးကွယ်နေတတ်တဲ့၊ လူများယောင်လို့ လိုက်လို့ ရောင် အမောင် တောင်မှန်း၊မြောက်မှန်းမသိတဲ့ လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အစပိုင်းမတော့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး သမားလိုလိုနဲ့ တရားစွဲသင့်တယ် ဘာညာ၊ သံမဏိမယ်လို့ မြှောက်ပင့်ပေး၊ ဟော အစီရင်ခံစာလဲ ထွက်လာရော ဒေသခံတွေက ပညာမဲ့ လူတန်းစားတွေက ဒီလိုပဲ လုပ်တတ်ပါတယ် ဖြစ်သွားပါလေရော။
ဒီလို ဝေဖန်လို့ မင်းကော ဘာလုပ်တတ်လဲလို့ လာမေးရင် ကျွန်တော်လဲ ဘာမှ မလုပ်တတ်ဘူးဗျ၊ လုပ်တတ်တာကတော့ ကိုယ့်အမြင်ကို အရှိအတိုင်း အတည့်အတိုင်း ပြောတတ်တာလေး တခုပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်လဲပဲ ဒီလို ဝေဖန်လို့ ဓာတ်မတည့်စာစားပြီး ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေ လာဆဲမဲ့ ပါရာဒိုင်းကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပြင်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် မောင်အတီးပါ။ ဝါးလုံးရှည်နှင့် သိမ်းကြုံးရမ်းလိုက်သည်။
Posted: 16 Mar 2013 11:30 PM PDT
At 31, wrote the widely circulated "Summary View of the Rights of British America and retired from his law practice.
At 33, took three years to revise Virginia 's legal code and wroteaPublic Education bill andastatute for Religious Freedom.
At 36, was elected the second Governor of Virginia, succeeding Patrick Henry.
At 60, obtained the Louisiana Purchase , doubling the nation's size.
At 81, almost single-handedly created the University of Virginia , and
served as its first president.
Thomas Jefferson knew because he himself studied the previous failed attempts at government. He understood actual history, the nature of God, his laws and the nature of man. That happens to be way more than what most understand today. Jefferson really knew his stuff. A voice from the past to lead us in the future.
"When we get piled upon one another in large cities, as in Europe, we shall become as corrupt as Europe ." -- Thomas Jefferson
"My reading of history convinces me that most bad government results from too much government." -- Thomas Jefferson
"The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of
patriots and tyrants." -- Thomas Jefferson
"To compelaman to subsidize with his taxes the propagation of ideas which he disbelieves and abhors is sinful and tyrannical."-- Thomas
"I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around the banks will deprive the people of all property - until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered."
Source: An email which Angela sent me on Jan 29th, 2013.
Posted: 17 Mar 2013 02:16 AM PDT
Enam anggota polis kelmarin bertindak menyerbu pejabat Suara Keadilan di Cheras dengan alasan untuk mendapatkan nota tulisan wartawan Keadilan Daily.
Mereka merupakan pasukan penyiasatan dari Johor Baharu berhubung kes kenyataan Naib Presiden PKR, Tian Chua berkaitan kontroversi Lahad Datu yang dimuat naik portal Keadilan Daily, 1 Mac lalu.
Ketika awal serbuan, polis mendakwa mempunyai waran menggeledah dan merampas komputer yang terlibat tetapi apabila diminta gagal menunjukan waran yang disebut.
"Mulanya kata nak rampas komputer, kemudian apabila peguam masuk campur membantah tindakan mereka, mereka kata nak ambil nota wartawan pula.
"Mereka boleh saja datang ambil, tidak perlu untuk geledah," ujar Editor Suara Keadilan, Fazallah Pit ketika dihubungi TVSelangor berhubung kejadian pagi tersebut.
Beliau turut melahirkan rasa pelik dengan tindakan kumpulan polis berkenaan kerana pihaknya memberikan kerjasama yang baik terhadap siasatan yang dijalankan sebelum ini.
"Saya bersama-sama sub editor dan wartawan, beberapa kali beri kenyataan di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya berhubung siasatan tersebut namun tidak pernah pula mereka meminta nota wartawan.
"Serbuan pagi ini memang tak diduga dan menyebabkan suasana tidak senang," tegasnya lagi.
Kakitangan pejabat kemudian menelefon peguam Latheefa Koya yang meminta polis berurusan dengannya.
Polis kemudian beredar tanpa mengambil apa-apa daripada pejabat kira-kira setengah jam berikutnya namun memberitahu mereka mahu menunggu wartawan, Aisha Geoffrey yang bercuti hari ini untuk mengambil notanya.
Berhubung permintaan tersebut, Fazallah dan Aisha hadir bersama dengan peguam Eric Paulsen di Balai Polis Pudu, kira-kira jam 1 petang tadi untuk menyerahkan nota itu sebelum beredar kira-kira 15 minit kemudian.
Peguam Eric turut memohon salinan waran geledah tersebut tetapi polis enggan berbuat demikian.
Bukankah Tian Chua sudah didakwa di mahkamah Sesyen yang sepatutnya polis sudah mempunyai bukti maka dengan sebab itu beliau didakwa?
Mengapa pula baru sekarang mahu mencari bukti dengan mendapatkan nota tulisan wartawan Keadilan Daily berkenaan?
Prinsip asas bahawa "one is considered innocent until proven guilty" sepatutnya terpakai dan bukan seperti di negara ini di mana "one is considered guilty until proven innocent".
Posted: 16 Mar 2013 09:40 PM PDT
Sweet tooth's been acting up strange lately, and since I noticed for the first time this year that all the ingredients were available - includingacomb of pisang rajah on sale at the local market aboutaweek ago and also the purple variety of sweet potatoes - today would be an appropriate time to indulge myself in another pot of pungat (or pengat, according to your taste). A small pot this time as it's meant for, ahem, family's consumption only.
So to market, to market we went this morning to round up the other ingredients, including the yam and most importantly, fresh coconut milk. Whilst cooking, I decided to dump in some leftover slices of tnee koay from the past Chinese New Year. Tadahh, our latest nyonya masterpiece:
Posted: 16 Mar 2013 09:33 PM PDT
No reason for the Sabah RCI to takea'break' until general election is over.
I believe the process must continue irrespective of when the national poll is set or who would form the next government. And now that the opposition is politicising it - even linking it to the Suluks intrusion in Lahad Datu - we better get cracking and finish what we have started.
Findasolution to the 'problems'. One can't put the blame on the government as the directive was clear on the issuance of ICs.
However, some irresponsible people involved with implementing the directive had made it looked so ugly.
Whether the exercise started 10, 20 or 30 years ago, the ruling government 'didn't break any rule' as only those qualified were given the IC.
Former PM Tun Dr Mahathir Mohamad also said his government cannot be blamed because the directive was very, very clear - only the qualified ones should be considered.
PAPAR: The government had never issued any directive to any quarters to issue identity cards (IC) or citizenship to unqualified immigrants in Sabah, said Tun Dr Mahathir Mohamad.
As such, he said, Sabahans could not blame the government during his administration over cases of fraud committed by certain parties for self-interest.
"I am aware the issue (IC project) is getting the attention of the people. I have been told, there were those who were not qualified, having just arrived, who received IC.
"This is not our directive, not the government's directive...this is fraud on the part of the officers in the area because of other interests," he told reporters on Saturday.
The former prime minister was asked to comment on the opposition campaign trend which was aggressively playing up the IC Project issue to garner the people's support, in view of the coming general election.
He clarified that many people who were not from this country were made citizens because they had stayed in the country foralong time and had mastered the national language.
"Many of us are from other countries, for example from China, Arab (countries) and India. All of them have stayed here foralong time and are loyal to this country.
"We give them citizenship if they meet the necessary conditions," he said.
Lahad Datu: Pakatan leaders don't give itadamn!
A blessed Easter to all Christians
Welcome to freedom of expression; PR style!
Deja Vous Confusion?
Sultan Kelantan Sentiasa Menziarah Rakyatnya...
The Beauty Of Islam By Yusuf Islam
A Caring BN Government...
Pemfitnah Itu Pendek Umur, Kini Papagomo Cipta Ala...
investigate and charge taib!!!
Video Terbaru Memfitnah Anwar Disebarkan Papagomo
Aiyoyo Surendran! What are you talking?
MAHKAMAH RAKYAT PUTUSKAN MAHATHIR PENGKHIANAT SEBE...
Datuk Ghafir Mahu Saman Utusan Kerana Putarbelit K...
Bekas Ketua Pemuda PAS Greenwood Gombak Sertai PAS...
[EDISI KANTOI] Rambut Pelaku Itu Di Belah Tengah!...
Swedish Experience Of Accessibility In Kuala Lumpu...
[VIDEO] Langkah Pertama Wasatiyah Ialah Nyahkan UM...
Photos taken on5years anniversary as Penang Stat...
VIDEO-VIDEO Rakaman Macai Pro-UMNO Serang Pejabat ...
Monks ProtestingTurkey’s food aid and camps for Ro...
Chap Goh Mei Joy For The Disabled
Misuari... the other chameleon!
APS Siap Sedia Gempur PRU 13!
Get the culprits!
Our soldiers' safety in Mindanao... and Misuari's ...
An umitigated disaster in Lahad Datu